भारतमा कोरोना महामारी भन्दा बढी चर्चा सुसान्त राजपुतको मृत्यु किन ? : एक रहस्य - सिम्रिक खबर
कुनै जवान चर्चित कलाकारको निधन विश्वमा जहाँसुकै पनि ठूलो खबर हो। तर बलिवुड कलाकार सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्यु र उनकी प्रेमिका कलाकार रिया चक्रवर्तीको दानवीकरणको जुन स्तरले भारतको मूल समाचारमा कब्जा जमाइरहेको छ त्यसले कैयन् मानिसहरूलाई कतै राष्ट्रिय सङ्कट नै छायामा पारेको हो कि भन्ने परिरहेको छ। सञ्चारमाध्यमको यो असाधारण चासो जुन महिनामा मुम्बईस्थित घरमा राजपूतको लाश भेटिएदेखि सुरु भयो।
प्रहरीले ती ३४ वर्षीय कलाकारले आत्महत्या गरेको बतायो र समाचार विवरणहरूमा उनी मानसिक स्वास्थ्यको समस्यासँग जुझिरहेको उल्लेख भए। तर राजपूतका पिताले चक्रवर्तीले उनलाई आत्महत्या गर्न उक्साएको, छोराको पैसा चोरेको, औषधिको ओभरडोज (धेरै मात्रा दिएको) तथा हत्या नै गरेको समेत आरोप लगाएपछि अहिले यो मामिला सङ्घीय प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। ती आरोप अप्रमाणित छन् र रियाले अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। राजपूतका लागि गाँजा किनिदिएको आरोपमा मङ्गलवार चक्रवर्तीलाई भारतको लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय एनसीबीले पक्राउ गरेको छ। ती आरोप रियाले अस्वीकार गरेकी छन्।
कलाकार सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्यु र उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीको जुन स्तरले भारतको मूल समाचारमा कब्जा जमाइरहेको छ त्यसले राष्ट्रिय सङ्कट नै छायामा पारेको छ।
सञ्चारमाध्यमबाट एकोहोरो छानबिन वा मिडिया ट्रायलमा जथाभावी आरोपहरू लगाइएका छन्। भारतका चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोताहरूले चक्रवर्तीलाई दोषी ठहर गरिसकेको देखिन्छ। “कुनै रियालिटी शोजस्ता कार्यक्रमको अर्को प्रतिस्पर्धी छैन – सबैजनाको ध्यान टेलिभिजन समाचारमा छ,” न्यूज वेबसाइट द प्रिन्टकी मिडिया सम्पादक शैलजा बाजपेइले बताइन्। यो ‘मिडिया सर्कस’ त्यतिखेर देखा परेको छ जतिखेर भारतले कैयन् महत्त्वपूर्ण सङ्कट झेलिरहेको छ। गत सोमवार भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको आँकडाले त्यहाँको अर्थतन्त्रको डरलाग्दो चित्र देखियो। जुनमा सकिएको तीन महिने अवधिमा भारतको अर्थतन्त्र २३.९% ले खुम्चिएको पाइयो। यो सन् १९९६ मा भारतले त्रैमासिक आँकडा सार्वजनिक गर्न थाले यताकै सबभन्दा खराब अवस्था हो।
अर्थतन्त्रमा कोरोनाभाइरसको महामारीको उच्च प्रभाव परेको छ। भारतमा हाल अमेरिकापछि विश्वकै सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित भेटिएका छन्। चीनसँगको सिमानामा बढेको तनाव पनि सन् १९६० यताकै सबभन्दा खराब स्तरमा पुगेको छ। तर अधिकांश टेलिभिजन समाचार च्यानलले यी विषयमा थोरै ध्यान वा समय दिएका छन्। जब एउटा च्यानलमा एकजना सहभागीले अर्थतन्त्रको कुरा उठाए उनलाई तत्काल बोल्नबाट रोकियो। “म रेकर्डमा भन्न चाहन्छु कि हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन २३.९% ले गिरेको यो दिनमा मलाई दिक्क लागेको…,” उनी भन्दै थिए। तर प्रस्तोताले रोकिहाले।
“तपाईँलाई यस्तो दिक्क लागेको छ भने यो बहस सहभागी नभए पनि हुन्छ। हाम्रो समय, तपाईँको समय, देशको समय, दर्शकको समय र मेरो समय बर्बाद नगर्नूस,” उनी चिच्च्याए। “गइहाल्नूस, जानूस्,” भन्दै ती प्रस्तोताले अर्थतन्त्रबारे जान्न मन लागेको भए भोलिपल्टको अखबार पढ्न सुझाए।
एनसीबीले च्यानलले ‘२ हजार घण्टा’ बिताएको विवरण
अन्य च्यानलहरूमा पनि यस्तै नाटकीय दृश्य देखिन्छन्। जहाँ प्रस्तोताहरूले ती ‘सेलिब्रिटी’ को मृत्यु यो समयकै ‘सबभन्दा ठूलो समाचार घटना’ भएको बारम्बार बताउँछन्। चक्रवर्तीलाई एनसीबीले पक्राउ गरेपछि एकजना समाचार प्रस्तोताले उनको च्यानलले यो समाचारका लागि २,००० घण्टा खर्च गरेको समेत भने। उसोभए राजपूतको मृत्युले किन यसरी अत्यधिक मिडिया चासो निम्त्यायो। अनि रिया चक्रवर्तीलाई किन यसरी दानवीकरण गरियो?
च्यानलहरूमा नाटकीय दृश्य देखिन्छन्। जहाँ प्रस्तोताहरूले सुशान्त सिंहको मृत्यु यो समयकै ‘सबभन्दा ठूलो समाचार घटना’ भएको बारम्बार बताउँछन्।
चुनावी दाउपेच र राजनीति
सबभन्दा स्वाभाविक कारण त राजनीति नै हो भनेर विश्लेषकहरू भन्छन्। उनीहरूका अनुसार च्यानलहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी बीजेपीलाई अप्ठेरो नपर्ने किसिमका समाचारहरूमा अधिकांश च्याननले ध्यान दिने गरेका छन्। “राजपूतको गृहराज्य बिहारमा यही वर्षको अन्त्यमा चुनाव हुँदैछ। अनि राजनीतिज्ञहरू उनकै नाममा भोट बटुल्न चाहन्छन्,” बिहारको राजधानी पटनास्थित वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ तिवारीले बताए।
तिवारी भन्छन्, “चुनाव सकिएपछि बिहारमा कसैले सुशान्तबारे कुरा गर्ने छैनन्।” पश्चिमी महाराष्ट्र राज्यको राजधानी मुम्बईमा भने यो समाचार अझै लामो समय जीवित रहन सक्नेछ। त्यहाँ बीजेपी तथा उसको पुरानो सहयोगी तर अहिले राज्य सरकारको नेतृत्व गरेको प्रतिद्वन्द्वी शिवसेनाबीच तिक्तता बढेको छ। बीजेपीले शिवसेनाको मन्त्रीलाई मामिलामा मुछिएको आरोप लगाएको छ। तर ती मन्त्रीले आरोप अस्वीकार गरेको मुम्बईस्थित वरिष्ठ पत्रकार अभय देशपाण्डेले बताए। “बीजेपीले सकेसम्म चाँडो यहाँको शिवसेना सरकार गिराउन खोजिरहेको छ। तर उनीहरू पहिले शिवसेनाको छवि जनतासामु बिगार्न चाहन्छन्। त्यसैले यो समाचार चलिरहोस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्,” देशपाण्डेले भने।
झुट्टो दाबी गरिएको भन्दै मास्कका दुई विज्ञापनमा प्रतिबन्ध सरकार दङ्ग? तर प्रिन्टकी बाजपेइले भनेको जस्तै यो समाचारले अन्तै ध्यान मोडिदिएको हुँदा सरकारलाई राम्रै भइरहेको छ। “एउटा अपराधको घटना छ जसमा बलिवुड, सिनेमा तथा राजनीति जोडिएको छ। यसको केन्द्रमा एकजना सुन्दर नायिका छिन्। यसले ध्यान मोड्न सहजै सक्छ। मानिसहरूलाई वास्तविक मुद्दाबाट टाढै पारिदिन्छ,” बाजपेइले भनिन्।
“सरकार दङ्ग छ किनकी कसैले उसलाई अर्थतन्त्र, रोजगारी वा बढ्दो महामारीबारे सोधपूछ गरेको छैन।” अनि टिभी च्यानलहरूको निम्ति यो व्यापारिक रूपमा पनि फाइदाजनक नै छ। यसले उनीहरूको रेटिङ बढिरहेको र धेरै दर्शक अनि विज्ञापनको पैसा तानेको छ। “रेटिङ बढिरहेको छ किनकि अर्काको निजी जीवनमा चियाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई सहज भएको छ। दर्शकहरूले समाचारका प्रत्येक घटनाक्रममा रुचि देखाएका छन्। तर हामीले नदेखेको जस्तै गरेको विषय पनि सामना गर्नै पर्छ – यो प्रवृत्तिले हाम्रो समाजबारे के बताउँछ?” यसले के बताउँछ भने यही प्रवृत्तिकै कारण शायद रिया चक्रवर्तीको दानवीकरण भइरहेको छ।